Asomafo Nnwuma 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 22:1-30
Paul yii n’ano wɔ nnipadɔm no anim (1-21)
Paul ma wohui sɛ ɔyɛ Romani (22-29)
Wɔmaa Sanhedrin no behyiaam (30)
22 “Mmarima, anuanom ne agyanom, muntie me mma minyi m’ano nkyerɛ mo.”+ 2 Bere a wɔtee sɛ ɔrekasa akyerɛ wɔn wɔ Hebri kasa mu no, ɛma wɔyɛɛ komm koraa. Na ɔkae sɛ: 3 “Meyɛ Yudani+ a wɔwoo me Tarso a ɛwɔ Kilikia,+ nanso Gamaliel+ na ɔkyerɛkyerɛɛ me* wɔ kurow yi mu sɛnea ɛbɛyɛ a medi agyanom Mmara so pɛpɛɛpɛ.+ Na mebɔɔ Onyankopɔn adwuma ho mmɔden sɛnea mo nyinaa moyɛ nnɛ yi.+ 4 Wɔn a wɔnam Ɔkwan yi so no, metan wɔn ani, na mema wokum wɔn. Mekyekyeree mmarima ne mmea nyinaa, na mema wɔde wɔn guu afiase,+ 5 na ɔsɔfo panyin no ne mpanyimfo bagua no nyinaa di ho adanse. Wɔn ara nkyɛn nso na migyigyee nkrataa kɔmaa anuanom a wɔwɔ Damasko no, na na menam kwan so rekɔkyere wɔn a wɔwɔ hɔ no aba Yerusalem ama wɔatwe wɔn aso. 6 “Bere a menam kwan so a mereyɛ adu Damasko, bɛyɛ prɛmtobere* no, prɛko pɛ na hann kɛse bi hyerɛn fii soro twaa me ho hyiae,+ 7 na mitwa hwee fam. Ɛnna metee sɛ nne bi rebisa me sɛ: ‘Saul, Saul, adɛn nti na woretan m’ani?’ 8 Mibuae sɛ: ‘Ɛyɛ wo hena, Owura?’ Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Ɛyɛ me Nasaretni Yesu a woretan m’ani no.’ 9 Mmarima a wɔka me ho no huu hann no, nanso wɔante asɛm a onipa no ne me kae no. 10 Ɛnna mekae sɛ, ‘Awurade, menyɛ dɛn?’ Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ: ‘Sɔre, kɔ Damasko, na biribiara a wɔahyɛ ato hɔ sɛ yɛ no, wɔbɛka akyerɛ wo wɔ hɔ.’+ 11 Nanso esiane sɛ na hann no hyerɛn paa nti, na minhu hwee. Ɛno nti, wɔn a me ne wɔn nam no na esusoo me nsa de me kɔɔ Damasko. 12 “Ná ɔbarima bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Anania. Ɔyɛ ɔbarima a osuro Nyankopɔn na odi Mmara no so, na na Yudafo a wɔtete hɔ nyinaa bɔ no din pa. 13 Saa ɔbarima no baa me nkyɛn, na obegyinaa me ho. Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Onua Saul, san hu ade!’ Na ɛhɔ ara memaa m’ani so, na mihuu no.+ 14 Ɔkae sɛ: ‘Yɛn agyanom Nyankopɔn ayi wo sɛ hu n’apɛde, na hu ɔtreneeni no,+ na te nsɛm a ɔde n’ano ka, 15 efisɛ nea woahu na woate no, wo na wubedi ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa ama no.+ 16 Enti adɛn na woretwentwɛn wo nan ase? Sɔre, ma wɔmmɔ wo asu, na bɔ ne din+ ma ɛnhohoro wo bɔne.’+ 17 “Na bere a mesan baa Yerusalem+ a merebɔ mpae wɔ asɔrefi hɔ no, minyaa anisoadehu, 18 na mihuu Awurade sɛ ɔreka akyerɛ me sɛ: ‘Ma wo ho nyɛ hare, na fi Yerusalem ntɛm, efisɛ me ho adanse a wudi no, wɔrennye ntom.’+ 19 Na mekae sɛ: ‘Awurade, wɔn ankasa nim yiye sɛ, na miwurawura hyiadan mu kɔkyere wɔn a wogye wo di no gu afiase hwe wɔn;+ 20 na bere a wɔrehwie wo dansefo Stefano mogya agu no, na migyina hɔ bi, na mepenee so, na mehwɛɛ wɔn a wɔrekum no no ntaade nguguso so.’+ 21 Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Kɔ, efisɛ mɛsoma wo akɔ aman a ɛwɔ akyirikyiri mu.’”+ 22 Nkurɔfo no tiee no ara kosii sɛ ɔkaa saa asɛm no. Ɛnna wɔmaa wɔn nne so kae sɛ: “Kum saa ɔbarima yi fi asaase so, na ɔmfata sɛ ɔtena ase!” 23 Na wɔteɛteɛɛm totow wɔn ntaade gui, na wotuu mfuturu guu mframa mu.+ Ɛno nti, 24 ɔsahene no kae sɛ wɔmfa Paul mmra asraafo asoɛe hɔ, na ɔkae sɛ wɔmmɔ no mmaa nkosi sɛ ɔbɛka nea wayɛ, sɛnea ɛbɛyɛ a obehu ade pɔtee a ama wɔreteɛteɛm gu Paul so saa no. 25 Na bere a wɔtwee Paul mu a wɔrebɛbɔ no mmaa no, obisaa ɔsraani panyin a ogyina hɔ no sɛ: “Mmara ma kwan sɛ mobɔ Romani* mmaa bere a wommuu no fɔ anaa?”*+ 26 Bere a ɔsraani panyin no tee eyi no, ɔkɔɔ ɔsahene no nkyɛn kɔbɔɔ no amanneɛ, na obisaa no sɛ: “Dɛn na wopɛ sɛ woyɛ yi? Hwɛ, ɔbarima yi yɛ Romani.” 27 Enti ɔsahene no baa Paul nkyɛn bebisaa no sɛ: “Ka kyerɛ me, woyɛ Romani?” Ɛnna ɔkae sɛ: “Yiw.” 28 Ɔsahene no kae sɛ: “Sika kɛse paa na mede tɔɔ saa hokwan yi bɛyɛɛ ɔman ba.” Ɛnna Paul kae sɛ: “Me de, wɔde woo me.”+ 29 Enti ntɛm ara, mmarima a anka wɔrebɛyɛ Paul ayayade ama waka nea wayɛ no twee wɔn ho fii ne ho. Bere a ɔsahene no hui sɛ Paul yɛ Romani, ɛnna ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn agu no no, ɔbɔɔ hu.+ 30 Bere a ade kyee no, na ɔpɛ sɛ ohu dekode pɔtee a enti Yudafo no abɔ Paul sobo no. Enti ɔsan no, na ɔmaa asɔfo mpanyin no ne Sanhedrin no nyinaa behyiaam. Afei ɔde Paul sianee, na ɔma okogyinaa wɔn mfinimfini.+
^ Anaa “wɔkyerɛkyerɛɛ me wɔ Gamaliel nan ase.”
^ Anaa “bɛyɛ awia 12.”
^ Anaa “Roma man ba.”
^ Anaa “bere a wonnii n’asɛm anaa?”
Asomafo Nnwuma 22